Madaxweynaha Tansaaniya: Tirada koowaad ee u ololeeya dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Madaxweynaha Tansaaniya: Tirada koowaad ee u ololeeya dalxiiska Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Iyada oo u ololeyneysa inay soo bandhigto dalxiiska Tansaaniya ee adduunka oo dhan, Madaxweynaha Tansaaniya Samia Suluhu Hassan waxay socdaal ku maraysaa wareegga dalxiiska ee waqooyiga, iyada oo hagaysa toogashada filim dokumentari ah oo laga sameynayo goobo muhiim ah oo heer sare ah.
Documentary -gaan ayaa laga bilaabi doonaa Mareykanka marka la dhameystiro, iyadoo la beegsan doono in lagu suuq geeyo laguna soo bandhigo goobaha dalxiiska ee Tansaaniya oo adduunka oo dhan ah.
Madaxweyne Samia wuxuu sheegay in dukumintiga Royal Tour uu soo bandhigi doono dalxiisyo kala duwan, maalgashiyo, farshaxan iyo soojiidasho dhaqameed oo laga heli karo laguna arki karo Tansaaniya.
Ciyaartoyda muhiimka u ah dalxiiska iyo warshadaha soo dhoweynta ayaa ku faraxsan.
Ka dib markii la bilaabay dukumintiga filimka Royal Tour ee Jasiiradda Spice ee Zanzibar dabayaaqadii bishii Ogosto, the Madaxweynaha Tansaaniya ayaa sahan noocan oo kale ah oo dalxiis ah ku duubay magaalada taariikhiga ah ee Bagamoyo oo ku taal xeebta Badweynta Hindiya. Magaalada taariikhiga ah ee dalxiiska ee Bagamoyo waxay 75 kilomitir u jirtaa Daarusalaam, oo ah caasimadda ganacsiga Tanzania.
Bagamoyo oo hore u ahayd magaalo ganacsi addoon, waxay ahayd meeshii ugu horraysay ee ay soo galaan Masiixiyiinta Masiixiyiinta ah ee Yurub ka yimid qiyaastii 150 sano ka hor, taasoo ka dhigtay magaaladan taariikhiga ah ee yar inay noqoto albaabka iimaanka Masiixiga ee Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika.
Bishii Maarj 4, 1868, Aabbayaasha Ruuxa Quduuska ah ee Kaatooligga ayaa la siiyay dhul ay ku dhistaan ​​kaniisad iyo keniisad oo ay lahaayeen maamulada maxalliga ee Bagamoyo iyagoo amar ka haysta Suldaanka Cumaan oo ahaa taliyihii Zanzibar.
Hawlgalkii ugu horreeyay ee Kaatooligga ee Bariga Afrika waxaa lagu aasaasay Bagamoyo ka dib wada xaajoodyo guulaystay oo dhex maray adeegayaashii Masiixiyiinta ee hore iyo wakiilladii Sultan Said El-Majid, the Sultan Barghash. Labadan hoggaamiye ee caanka ah waxay ahaayeen taliyayaashii hore ee Tansaaniya hadda.
Hawlgalka Bagamoyo waxaa la aasaasay 1870 si loogu xareeyo carruurta laga soo badbaadiyey addoonsiga laakiin markii dambe loo ballaadhiyey kaniisadda Katooliga, iskuul, aqoon isweydaarsiyo dugsi farsamo, iyo mashaariic beeraha ah.
Nalalka, Kaamirada, Waxqabadka!
Documentary-ga hagaha ah ee Madaxweyne Samia Suluhu Hassan ayaa lagu wadaa inuu kor ugu qaado goobaha dalxiiska ee Tansaaniya dhagaystayaal caalami ah si kor loogu qaado wacyiga safarka ka dib markii dhaqaalaha adduunka uu si xun u saameeyay saamaynta masiibada COVID-19.
“Waxa aan sameynayo waa inaan kor u qaadno dalkeenna Tansaaniya si caalami ah. Waxaan u soconnaa goobaha soo jiidashada filimada. Maalgashadayaasha suurtagalka ah ayaa arki doona sida Tansaaniya run ahaantii u eg tahay, meelaha maalgashiga, iyo goobaha soo jiidashada ee kala duwan, ”ayay raacisay Samia.
Madaxweynaha Tansaaniya ayaa hadda hagaya shaqaalaha filimka Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) iyo Serengeti National Park ka dib markii uu sidaas oo kale ku sameeyay Buurta Kilimanjaro, oo ah buurta ugu dheer Afrika.
Ngorongoro iyo Serengeti labaduba waa jardiinooyinka duurjoogta ee ugu horreeya Tansaaniya oo jiida kumanaan dalxiisayaal goboleed iyo caalami ah sanad walba. Labadan beerood ee dalxiiska ee ugu sarreeya waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu booqashada badan Afrikada Bari, inta badan dalxiisayaasha safari duurjoogta ah.
Aagga Ilaalinta Ngorongoro waxaa lagu dhawaaqay UNESCO Goobta Dhaxalka Adduunka 1979 sababta oo ah sumcaddeeda iyo saamaynta adduunka ee ilaalinta iyo taariikhda aadanaha sida ay qoreen saynisyahanno kala duwan ka dib markii caalimkii caanka ahaa ee ku takhasusay cilmiga dadka ee Mary iyo Louis Leakey ay ka heleen qalfoofka Ninkii Hore ee Olduvai Gorge.
Soo jiidashada ugu weyn ee Aagga Ilaalinta Ngorongoro waa yaabka adduunka caanka ah - Ngorongoro Crater. Kani waa kii ugu weynaa ee aan daadadku ka dhalan oo aan kala go ’lahayn ee caldera oo la sameeyay intii u dhexeysay 2 ilaa 3 milyan oo sano ka hor markii uu fulkaano aad u weyn qarxay oo iskiis u soo dumay. Godka, oo hadda ah goob dalxiis iyo dalxiis heer caalami ah, ayaa loo arkaa inay tahay meel dabiici ah oo loogu talagalay xayawaanka duurjoogta ah ee ku nool meel ka hooseysa derbiyadeeda 2000-fuudh taas oo kala soocaysa aagga kale ee ilaalinta.
Beerta Qaranka Serengeti wuxuu caan ku yahay xoojinta duurjoogta, ugu soo jiidashada badan Socdaalka Weyn ee Weyn ee bannaanka ah, isagoo u diraya in ka badan 2 milyan oo duurjoog ah fasax dabiici ah Maasai Mara. Beerta Qaranka ee Serengeti waxay ka mid tahay jardiinooyinka safari ee ugu da’da weyn Afrika marka la fiiriyo xoolaheeda duurjoogta ah, inta badan naasaha waaweyn ee Afrika.
Socdaalka Weyn wuxuu ka kooban yahay xoolo aad u tiro badan oo ka kooban 2 illaa 3 milyan oo duurjoog ah, dameeraha, iyo geesaha oo ku socda wareegga 800-kiilomitir ee saacad-saac iyada oo loo marayo nidaamka deegaanka Serengeti iyo Maasai Mara si loo raadiyo daaqa ugu wanaagsan iyo helitaanka biyaha. Daaqsatadaas waxaa raaca libaaxyo iyo bahallo kale oo kumanyaal ah, waxayna dulqaad ku sugaan yaxaasyada ku jira Wabiyada Mara iyo Grumeti iyadoo ay xooluhu raacayaan jiheeyahooda gudaha.
Bagamoyo waxaa lagu horumariyey hudheelo dalxiis oo casri ah iyo hoyyo la seexdo, hadda waa janno fasax ah oo si dhakhso leh u koraysa kuna taal xeebta Badweynta Hindiya kadib Zanzibar, Malindi, iyo Lamu.